လှဖို့အတွက် သကြားဖြတ် – Beauty Secrets Magazine
You For Beauty Tips
သဘာဝတရားကြီးက ပေးအပ်ထားတဲ့သကြားတွေဟာ သစ်သီးဝလံတွေထဲမှာ ပါဝင်ပြီးသားပါ။ လူတစ်ယောက်အဖို့ နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ သကြားပမာဏမက ၂၅ ဂရမ်သာရှိတာမို့ သင်နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ ကော်ဖီ၊ လက်ဘက်ရည်နဲ့ အချိုရည်အပြင် အဆာပြေမုန့်တွေမှာလည်း သကြားဓာတ်တွေကို ပိုမိုစားသုံးမိနိုင်ပါတယ်။ သကြားကို လိုတာထက်ပိုမိုစားသုံးခြင်းက ကောင်းကျိုးထက် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဆိုးကျိုးတွေသာ ပိုမိုပေးစွမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သကြားစားသုံးခြင်းက ဖြတ်တောက်ကြည့်မလား???? အဲဒီလိုသကြားတွေပိုမစားတော့ရင်ကော သင့်အတွက် ဘာတွေအကျိုးဖြစ်ထွန်းလာမှာလဲ။ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
သင့်ရဲ့အရေပြားကို ပိုမိုနုပျိုစေပြီး ပိုမိုကြည့်ကောင်းစေပါတယ်။
သင်စားလိုက်တဲ့ အစားအစာတွေမှာပါတဲ့ သကြားဟာ သွေးတွင်းသကြားပမာဏကို အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားပမာဏ မြင့်တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်အရေပြားမှာရှိတဲ့ ကော်လဂျင်လေးတွေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သင့်ကိုပြည့်ဖြိုးစေတဲ့ပုံ ပေါက်စေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အရေပြားရဲ့ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်မှုကို လျော့ကျစေနိုင်သလို အရွယ်မတိုင်မီ အရေးအကြောင်းဖြစ်စေမှုတို့လည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုတေသီတွေအကြံပြုထားတာကတော့ သကြားမစားဘဲနေခြင်းက အရေပြားလျော့တွဲခြင်းနဲ့ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းတို့ကို လျော့ပါးစေပါသတဲ့။
ပိုမိုစားသုံးလိုက်တဲ့ သကြားတွေဟာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့ တူပါတယ်။ ပြောချင်တာက သူတို့တွေဟာ အစာကြေလွယ်ပြီး သင့်ရဲ့သွေးတွင်းကို အလျင်အမြန်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မြန်ပဲ ကုန်ဆုံးသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သကြားဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ စွမ်းအင်တွေအဖြစ်ပုံစံပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ သကြားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ဆိုဒါတွေကို သောက်သုံးခြင်းဟာ ပေါင်ချိန်တွေတိုးလာစေမှန်း သိကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းနေရာတွေမှာပေါ့။ ဒါ့အပြင် ကင်ဆာနဲ့ နှလုံးရောဂါတွေကိုလည်း ထပ်ဆောင်းဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် အချိုပွဲတွေ၊ ဆိုဒါတွေနဲ့ အချိုရည်တွေကို ရှောင်ကျဉ်လိုက်ခြင်းဖြင့် သင့်ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားနေရာက အဆီတွေကို လျှော့ချလိုက်ပါတော့။
အင်ဆူလင်ပမာဏများပြားလာခြင်းက သင့်အစာအိမ်ကို ပေါင်ချိန်တိုးလာစေမှာ မဟုတ်တဲ့အပြင် သူတို့တွေက အဆီဆဲလ်တွေကို သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ကနေ ကယ်လိုရီထိန်းသိမ်းတဲ့ နေရာမှာ ပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သန့်စင်ထားတဲ့ သကြားခဲတွေနဲ့ သကြားပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကတော့ သင့်ရဲ့အင်ဆူလင်ပမာဏကို ရပ်တန့်နေစေပါတယ်။ ဒီအတွက် အင်ဆူလင်ကိုအားမပေးတဲ့ သကြားကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ဆာလောင်ခြင်းလျော့နည်းလာပြီး မက်တာဘော်လစ်ဇင်တွေ တိုးလာကာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်မလှုပ်ရှားဘဲ ဝိတ်ကျလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကြိုက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ချိုမြမှုတွေသာ လျော့နည်းနေမယ်ဆိုရင် ဝိတ်တက်ဖို့လည်း ပူစရာမလိုသလို ဆီးချိုရောဂါ အမျိုးအစားနံပါတ် ၂ အတွက်လည်း ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့နှလုံးဟာ သင့်ကို အချိန်မီအလုပ်ပြီးစေဖို့ ညနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေအထိ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွတ်ကီးတွေ၊ သကြားလုံးတွေကတော့ သင့်နှလုံးကို အဆင်ပြေစေမှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အချိုတွေပိုမိုစားသုံးတာက နှလုံးရောဂါကို ဖြစ်နိုင်ခြေများစေပြီး နှလုံးရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုကလည်း ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုပဲ သကြားစားသုံးခြင်းကို ဖျက်သိမ်းပြီး ကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တွေကို ဖန်တီးလိုက်ပါတော့နော်။
Credit : MingalarBarMorning
သွားတွေဝါစေတဲ့ အစားအစာတွေကို သိသလား
မိန်းကလေးတွေ ရင်သား တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အရွယ်အစားမတူတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ည ၈ နာရီနောက်ပိုင်း ဘာတွေစားလို့ရသလဲ
Copyright © 2019 Beauty Secrets Magazine. Powered by WordPress and Bam.